Dutchtown အနောက်အိမ်နီးချင်းအစည်းအရုံး• DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Dutchtown အနောက်အိမ်နီးချင်းအစည်းအရုံး မစ်ဆူရီပြည်နယ်စိန့်လူးဝစ္စမြို့ရှိဒတ်ခ်ျတောင်းအနောက်ဘက်တွင်ရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ပြအိမ်နီးချင်းများ၏ဘဝအရည်အသွေး၊ ရပ်ရွာအသိုင်းအ ၀ န်းနှင့်ဂုဏ်ယူမှုတိုးတက်စေရန်အတွက်တည်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက ဦး တည်ချက်မှာဂရန်း၏အနောက်ဘက်ရှိ Dutchtown ရပ်ကွက်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်နေထိုင်သည့်နေရာမည်သို့ပင်ရှိပါစေလူတိုင်းတက်ရောက်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အတူတကွကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ကိုတိုးတက်အောင်ကူညီနိုင်သည်။
လက်ရှိ COVID-19 အခြေအနေကြောင့်အစည်းအဝေးများမှာဆိုင်းငံ့ထားသည်။ အိမ်နီးချင်းများစုရုံးနိုင်သည့်အခါလုံခြုံမှုရှိပါကအစည်းအဝေးများပြန်လည်စတင်ပါမည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်း Dutchtown တွင်ဖြစ်ပျက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုသိရှိရန်အောက်တွင်စာရင်းသွင်းပါ
အစည်းအဝေးများသည်လတစ်လ၏ဒုတိယဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ည ၇ နာရီ၊ Grbic စားသောက်ဆိုင်နှင့်ပွဲနေရာMeramec မှာ 4071 Keokuk လမ်း။ အစည်းအဝေးအများစုတွင်နောက်ဆုံးသတင်းများကို Alderman၊ Neighborhood Improvement Specialist, Neighborhood Liaison Officer နှင့်အခြားစပီများမှဖွဲ့စည်းထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင်တင်ပြလိုပါက၊ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.
နိုင်ငံသားများဝန်ဆောင်မှုဗျူရို: (314) 622-4800 သို့မဟုတ် တွစ်တာပေါ်တွင် @stlcsb စီးတီးန်ဆောင်မှုကိုတောင်းဆိုရန်
ရပ်ကွက် (၂၅) ရပ်ကွက်အတွင်းတိုးတက်မှုအထူးကျွမ်းကျင်သူခရစ်ယာန်ရောင်းသူ: SallerC@stlouis-mo.gov သို့မဟုတ် (314) 657-1375
SLMPD ခရိုင်တစ်ခု: (314) 231-1212 အရေးပေါ်အခြေအနေမဟုတ်, အရေးပေါ်အဘို့အ 911
အိမ်နီးချင်းဆက်ဆံရေးအရာရှိ Steve Burle: SMBurle@slmpd.org
ရပ်ကွက် 25 Alderman Shane Cohn: CohnS@stlouis-mo.gov
သင်စိတ်အညစ်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်စိတ်အညစ်ဂုဏ်သတ္တိများကိုအစီရင်ခံသောအခါသတိရပါ CSB ဒါမှမဟုတ်ရဲမှ ပြtheနာတည်ရှိရာအမှန်တကယ်လိပ်စာကိုကိုးကားပါ။ လုပ်ဆောင်မှုကိုလိပ်စာဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၊ လိပ်စာကိုစနစ်တကျမှတ်သားထားခြင်းဖြင့်ပြpropertiesနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကိစ္စများကိုတည်ဆောက်ရန်ကူညီသည်။
ပို။ Dutchtown အရင်းအမြစ်များ
ပိုမိုသောရပ်ကွက်နှင့်မြို့အရင်းအမြစ်များအတွက်၊ DutchtownSTL ၏အရင်းအမြစ်များစာမျက်နှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်သည်သော အဆိုပါ CSB မှလမ်းညွှန်သတင်းအချက်အလက် အိမ်နီးချင်းတိုးတက်မှုအထူးကုနှင့် စိန့်လူးဝစ္စရဲဌာနကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ.
လတ်တလော DWNA အစည်းအဝေးသတိပေးချက်များ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံတ ၀ ှမ်းရှိသတင်းများ၊ အဖြစ်အပျက်များ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်အခြားအရာများအတွက်အောက်တွင်စာရင်းသွင်းပါ။
သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာသာလိုအပ်သော်လည်းသင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုအသိုင်းအဝိုင်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီရန်အပိုထပ်ဆောင်းအချက်အလက်များကိုသင်ပေးနိုင်ပါသည်။
မင်းကိုမင်းတို့အကြောင်းငါတို့ကိုများများပြောပြခိုင်းတာစိတ်ထဲရှိလား သေချာတာပေါ့! ရပါတယ်ကျေးဇူးပါ။ ဖြည့်စွက်သောလယ်ကွက်အချို့ကိုဖြည့်ပါ၊ ဒါကအားလုံးကိုရွေးချယ်လို့မရဘူး
လိုင်း2နေရပ်လိပ်စာ
သင် Dutchtown areaရိယာ၌နေထိုင်ပါသလား Yes အဘယ်သူမျှမ
ဂရန်းအနောက်ဘက်မှာနေဘူးလား Yes အဘယ်သူမျှမ
မင်းအိမ်ကိုငှားလား၊ ငှား ပိုင်ဆိုင် အဖြေမပေးလိုပါ
Dutchtown မှာဘယ်လောက်ကြာကြာနေခဲ့တာလဲ နေ့ရက်များ၊ လများ၊ နှစ်များသို့မဟုတ်သင်၏အကောင်းဆုံးခန့်မှန်းမှုကဘာလဲ။
Dutchtown တွင်သင်အလုပ်လုပ်သည်သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်ပါသလား။ ငါ Dutchtown တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ငါ Dutchtown အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်သည်။ မဟုတ်
မင်းဘယ်မှာအလုပ်လုပ်တာလဲ? သတိပေး, ဒီအားလုံး optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်လိုချင်တာကိုသာမျှဝေပါ
Dutchtown အတွက်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းကိုစိတ်ဝင်စားပါသလား။ Yes အဘယ်သူမျှမ
ကျွန်ုပ်တို့၏စာပို့စာရင်းအတွက် Sign Up
ဒိန်းမတ် Dutchtown အနောက်အိမ်နီးချင်းအစည်းအရုံး